Muuri News Network » Waziir Axmed Ciise Cawad: “Farmaajo Madaxweyne Mareykan ma aha, waa madaxweyne Soomaaliyeed.
Waziir Axmed Ciise Cawad: “Farmaajo Madaxweyne Mareykan ma aha, waa madaxweyne Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa markii labaad ka baaqday shir-weynaha guud ee Qaramada Midoobay ee magaalada New York ka socda iyadoo la sheegay in sababaha uu u tegi waayay ay tahay isagoo haysta baasaboor Maraykan ah.
Sharciga dalka Mareykanka ayaa la sheegay inuusan oggoleyn in qof haysta baasaboorkooda uu dalkaasi tego isagoo adeegsanayo baasaboor dal kale.
Hase yeeshee Wasiirka Arrimaha dibada ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa difaacay ka maqnaanshaha shirka ee Madaxweyne Farmaajo isagoo sheegay in madaxweynaha uu u kala hormariyo howlaha u yaalla sida ay u kala muhiimsan yihiin.
”In madaxweynaha uu shirka ka baaqdo qasab ma ahan inay sabab yeelato, laakin waxay noqon kartaa inuu arrimo ka muhiimsan tagitaankiisa New York waqtigan la joogo ay jiraan, marka in la’is weydiiyo oo lala yaabo ma’aha. Madaxweynaha ayaa qiimeeya sida ay u kala horreeyaan, una kala muhiimsan yihiin howlaha uu qabanaayo, waana dhaqan adduunka ka jira, wax Soomaaliya kaliya u gaar ah ma aha” ayuu yiri wasiirka arimaha dibada ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u waramayay laanta afka soomaaliga ee BBCda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa dhawaan sheegay in sababta uu shirka Qaramada Midoobay uga qeyb gali waayay ay tahay maadaama uu ku mashquulsan yahay xallinta khilaafka maamul goboleedka Galmudug, hase yeeshee ragga siyaasada falanqeeya ayaa aaminsan in masaalix badan oo hadii madaxweynaha uu tagi lahaa shirkaasi u hirgali lahaa Soomaaliya ay haatan u muuqdaan in ay meesha ka bexeen.